Allgedo.com » Madaxweynaha Dowlad Gobaleedka Jubbaland oo qudbad xasaasi ah u jeediyay golahiisa wasiirada (Akhri 11 qodob)
Madaxweynaha Dowlad Gobaleedka Jubbaland oo qudbad xasaasi ah u jeediyay golahiisa wasiirada (Akhri 11 qodob)
Madaxweynaha Jubbaland waxa uu xusay in Sanadkii tagay ay Jubbaland si guud usoo afmeertay dadaaladii dib u heshiisinta kuwaas oo guulo la tabaan karo ay kasoo baxeen isla markaana ay ka dhalatay isku duubni shacab.
“Maanta waxaan idiin Cadaynayaa in Jubbaland aysan ka jirin qabiilo is laynaya ama xiitaa colaad isku qaba marka laga reebo Beesha Xiiranta/qolyaha Nabad diidka ah oo iyagu cid walba dagaal kula jira wax ay dhaafayaana uuna jirin” ayuu yiri Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam isagoo ugu baaqay dadweynaha midnimo iyo wadajir.
Madaxweynahu wuxuu cadeeyay in amaan la isku halayn karo uu ka jiro deegaanada Xorta ah ee Jubbaland isagoo hoosta ka xariiqay in taas lagu gaaray isku duubni Bulshada iyo Hay’adaha amaanka ah waxaana uu dadweynaha ku booriyay in Nabada ay ilaashadaan oo ay Dowlada kala shaqeeyaan.
Deeganada Gacanta Dowlada ka maqan ayuus xusay in Sanadkan 2017 gacanta lagu dhigi doono si looga faa’iideeyo Bulshada khayraadka uu Dhulkaas leeyahay.
3) Baahinta iyo daadajinta Maamulka Dowliga ah ee Heer Gogol iyo Heer Degmo.
Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam wuxuu sheegay in hanaanka daadajinta Maamulka Dowliga ah uu udub dhaxaad u yahay Jubbaland isla markaana Sanadkii tagay wax badan laga qabtay sidii haatankan Bulshada loo hordhigi lahaa isagoo xusay in Sanadkan 2017 uu sida ugu dhakhsiyaha badan u hirgalayo.
Madaxweynaha Dowlada Jubbaland ahna Taliyaha guud ee Ciidamada qalabka sida wuxuu sheegay in la tababaray oo la qalabeeyay qaybo badan oo kamid ah Ciidamada Darawiishta Jubbaland isla markaana si toos ah u hawlgala Booliska iyo Hay’adaha kale ee amaanka gudaha ayuu Madaxweynahu xusay in Sanadkii tagay wax badan laga qabtay sidoö kalana Ciidamada qaranka ayuu sheegay in hawshoodiii ugu horaysay ee isku dhafka Kismaayo laga hirgaliyay taas oo uu sheegay in ay bogaadin mudan tahay.
“Jubbaland waxay marti galisay in ka badan 300 Sadex Boqol oo qof oo isugu jira Madasha iyo dad uu meeqamkoodu sareeyo isla markana ka qayb galayay Shirkii madasha” ayuu yiri Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam.
6) Hirgalinta Doorashooyinka dadban.
Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam waxaa uu sheegay in gaba gabadii 2016 Magaalada Kismayo ay ka dhacday Doorashada Xubnaha labada Aqal kuwaas oo guul kusoo dhamaaday isla markana sidii ugu Wanaagsanayd ku dhamaaday.
Madaxweynaha Jubbaland wuxuu sheegay in Jubbaland ay diyaar u tahay qaabilaada dadka kasoo noqonaya Dhadhaab xiita hadii aysan Deeganka u dhalan balse Arintaas ay dhawr mar caqabado ka yimaadeen.
“Anaga Diyaar waxaan u nahay in aan qaabilo dadka soo noqonaya base waxaan Dowlada Federaalka ah iyo UNHCR isku maandhaafnay dadka lasoo celinayo oo aan niri inta aan lasso celin bal haloo diyaariyo Nolol ay kula qabsadaan dalka sida Waxbarasho, Caafimad, iyo Shaqo abuur ma Aqbalayno in dad ayna wax ka horaynin la iska soo daad gureeyo oo ay lamid noqdaan boqolalka gudaha ku barakacay.
Madaxweynahu wuxuu Sheegay in abaarta Dalka ka jirta ay marayso meel xun isla markana loo baahan yaya in loo koco sidii Bulshada Tabaalaysan loogu gurman lahaa waxaana uu sheegay in Deeganada Jubbaland ay gudi arintaa u sareen oo meelahii ugu horeeyay kaalmo ilaa hada gaarsiiyay.
Musuqa ayuu Madxaweynahu sheegay in uu la dagaalami doono isagoo Hay’adaha Dowlada ku dhiiri galiyay in laga dheerado musuq maasuqa si hawlaha Dowladu ay sidii logo tala galaxy ugu Socdaan.
Madaxweynaha Jubbaland Waxaa uu sheegay in hananka uruursanaanta Dhaqaalaha ay dadaal badan Xukuumadu galisay Sanadkii 2016 ka isla markana guulo la taban karo laga gaadhay waxaana uu carabaabay in haatan uruursananta dhaqaalahu uu yahay arin wax badan ka badalaysa hananka Maaliyadeed ee Dowlada.
Guddiyada Dastuuriga ah Sida Gudiga Adeega Garsoorka, Gudiga Dhulka, Gudiga dib u Eegista iyo Hirgalinta Dastuurka, iyo Guiyada kale ee la midka ah Madaxweynahu wuxuu xusay in Gudiyadan aad loogu baahan yahay isla markaana ay qorshaha Xukuumada kamid Tahay Sanadkan Cusub ee 2017 si gaar ah Gudiga Dhulka ayuu sheegay in aad loogu Baahan yahay maadama ay bateen dacwadaha dhinaca Dhulka la xiriira.
Madaxweynahu wuxuu xusay in Dhulka Jubbaland oo dhan ay Dowladu masuul ka tahay gaar ahaan dhulka dhisan iyo midka banaan ee ay lahayd Dowladii dhexe isla markana asran jirin cid qaadan karta muwaadiniinta ayuu uga digay in ay dhaqaale iska galiyaan dhul ay Dowladu leedahay oo lagala wareegi doono.
Musharaxiinta u Tartamaya Gudoomiyaha Baarlamaanka iyo Madaxweynaha Jamhuuriyada ayuu sheegay in ay waxa ay u Tartamayaan uu yahay xil culus oo masuuliyad adag loona baahan yahay Bisayl siyaasadeed iyo Siyaasad furfuran.
Xafiiska Warfaafinta iyo War Is Gaarsiinta ee Madaxtooyada Dawlad Gobaleedka